वेब खोज इञ्जिन अनुकूलन को सबै भन्दा परिभाषित क्षणहरू के हो?
इन्टरनेट सँधै बढ्दो र विकसित क्षेत्र हो. हरेक दिन मान्छे टन को विभिन्न गुणस्तर को खोज इन्जिनहरुमा अपलोड गर्छन. प्रयोगकर्ताहरूको लागि कुन सामग्री फायदेमंद हुन सक्छ भनेर बुझ्न र यसलाई स्प्यामबाट अलग गर्न, Google जस्ता ठूला खोजी इन्जिनहरू नियमित रूपमा एल्गोरिदम सुधार र अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ।. यसो गरेर, तिनीहरू वेबसाईट मालिकहरू र औसत प्रयोगकर्ताहरू दुवै गुणस्तरको डेटाबाट फाइदा लिनको लागि अवसर दिन्छ. यसबाहेक, नियमित एल्गोरिदम अद्यावधिकहरूले खोज इन्जिनहरूलाई स्प्यामरहरू र कालो टोपी एसईओ विशेषज्ञहरूलाई दण्डित गर्न सक्षम पार्दछ - logiciel gestion planning du personnel gratuit. त्यसैले, एसईओ खेलको शीर्षमा रहन, तपाइँ वेब खोज इन्जिन अनुकूलन उद्योगमा सबै उपन्यासहरु को बारे मा सजग हुनु पर्छ र तपाईंको साइटमा उपयुक्त सुधार गर्न आवश्यक छ।. यस लेखमा हामी तीन परिभाषित क्षणहरूमा छलफल गर्नेछौं जुन एसईओको स्वभाव परिवर्तन भयो र एसईओ विशेषज्ञहरूले वेबसाइट अप्टिमाइजेसनको तरिकाहरू परिवर्तन गर्छन्।.
वेब सर्च इन्जिन अनुकूलनमा कठोर परिवर्तन
यो भन्नका लागि यो लायक छ कि पछिल्लो दशकमा Google एल्गोरिदम अपडेटहरूले खोजी इन्जिनको नियमहरू निकै परिवर्तन गरेको छ। अनुकूलन. केही अनलाइन व्यापारीहरू Google अद्यावधिक पछि तिनीहरूको रैंकिङमा गिरावट भए तापनि अन्य दूरदर्शी वेबसाइट मालिकहरूले यस स्थानलाई एसईपी मा सुधार गर्न मौका पाएका थिए।. आज हामी तीन भन्दा शक्तिशाली शक्तिशाली एल्गोरिदम अद्यावधिक गर्छौं जुन आजको एसईओ परिवर्तन भयो.
पहिलो गुगल फ्लोरिडा अपडेट
पहिलो एक Google अपडेट नोभेम्बर 2003 मा भयो. यो गुगल फ्लोरिडा अपडेटको रूपमा चिनिन्छ. यो अद्यावधिक Google टाइममा ती समयमा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन थियो. फ्लोरिडा अद्यावधिकको प्राथमिक उद्देश्य ब्ल्याक-टोपी एसईओ विशेषज्ञहरूलाई हिसाब गर्न थालेको थियो जुन रैंकिंग हेरफेर गर्ने प्रयास गर्दै थिए. यो यस्तो ब्ल्याक-टोपी एसईओ प्रविधिबाट खोज्न सकिने तरिकाबाट टाढाको डिजाइन गरिएको थियो. 'खोजशब्द भरपूर' को शब्द खोज इन्जिन अनुकूलन विकास को प्रारम्भिक दिन देखि प्रकट भएको छ. यो एक छायात्मक प्रविधी हो जसले वेबमास्टर्सहरूलाई खोज रेटिङ हेरफेर गर्न सक्षम बनाउँछ. यो विशेष खोजशब्दहरू वा सामग्रीमा कुञ्जी वाक्यांशहरू सेट सम्मिलित गर्ने प्रक्रिया हो. नियमको रूपमा यी खोज सर्तहरू सामग्रीसँग कुनै सम्बद्धता थिएन र विशेष रूपमा खोज बिन्दुहरूको लागि डिजाइन गरिएको थियो, तर औसत प्रयोगकर्ताहरूलाई. यी वाक्यांशहरू पाठ मार्फत बारम्बार दोहोर्याउन सकिन्छ कि यो अनैतिक लाग्छ. त्यसैले, खोज इञ्जिन प्रणालीको साथ प्रयोगकर्ता अनुभव सुधार गर्न Google ले वेबसाइटहरूलाई क्यान्सर गर्न निर्णय गर्ने निर्णय गरेको छ जहाँ खोजशब्दहरू भरी भइरहेको छ. यस नवाचार पछि, धेरै साइटहरू ट्राफिक गुमाएका थिए र धेरै पीडा भयो. यसले वेबसाइट मालिकहरूलाई आफ्नो वेब स्रोत प्रतिष्ठा बहाल गर्न धेरै समय र प्रयास गर्यो. तथापि, यो मानक मूल्याङ्कन दिशानिर्देश उल्लङ्घन गर्ने प्रयासका लागि यो राम्रो पाठ हो.
Google पांडा अपडेट
यसको साइज र डिजिटल दुनिया मा प्रभाव द्वारा दोस्रो Google पांडा अद्यावधिक थियो. यो फरवरी 2011 मा पेश गरिएको थियो. यस फिल्टरको प्राथमिक उद्देश्य Google को शीर्ष खोजी नतिजाहरूमा काम गर्ने गरीब गुणस्तर सामग्रीसँग वेबसाइटहरूबाट बच्नको लागि थियो. त्यसो गरेर, Google ले SERP को शीर्ष नजिक उच्च-गुणस्तर र सान्दर्भिक साइटहरू फिर्ता गर्न चाहन्छ र खोजको समयमा प्रयोगकर्ताको अनुभव सुधार गर्दछ।. यो अद्यावधिक खोज परिणामहरूको 12% माथि चलेको थियो. निरन्तर ट्राफिक प्रवाहको साथ सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट प्लेटफार्महरू तिनीहरूको SERP पदहरू गिरावटको कारण 50% भन्दा बढी आगन्तुक गुमाए. यो Google अपडेटले केवल ती वेबसाइटहरू चोट गर्दछ जसले गुणस्तरको सामग्री कम गर्छ. अन्य डोमेनहरूको लागि, स्थिति नाटकीय रूपमा परिवर्तन गरिएको थिएन. Google ले यो स्पष्ट छ कि उच्च गुणस्तर र अधिकतम रूपमा प्रासंगिक सामग्री अधिक शीर्ष रेटिङको साथ इनाम गरिनेछ, जबकि कम-गुणस्तरको पढ्न सकिने पाठहरू दण्डित गरिनेछ।. पांडा मुख्यतया साइटहरूमा पतली सामग्रीसँग ध्यान केन्द्रित गरिएको छ. यो फिल्टर गुगलको लागि राम्रो तरिकाले राम्रो तरिकाले लक्षित खेती गर्न थालेको छ किनकी यो खोजीको नतिजामा एकदम कम मामला बनिरहेको छ जुन यसको कम गुणस्तर गैर-अनियमित सामग्री भएको छ जुन ठूलो मात्राको कारणले रैंक गर्न मिल्छ।. नियमहरूको प्रमुख उल्लङ्घनकर्ता यस Google फिल्टरबाट यो मितिमा पुन: प्राप्त भएन. आजकल, Google पाण्डे कोर रैंकिंग एल्गोरिदम को भाग को रूप मा विकसित गर्दछ. यसले ढिलो रोलिंग अद्यावधिकको एक भागको रूपमा कार्य गर्दछ, चिसो महिनाको चक्रमा. नतिजाको रूपमा, यो जान्न गाह्रो भयो कि कुनै साइट पाण्ड अद्यावधिकबाट पीडित छ वा छैन कि छैन.
Google पेंगुइन एल्गोरिथ्म अप्रिल 2012 मा सुरु भयो. यो एक webspam एल्गोरिथ्म हो जुन Google को दिशानिर्देशहरू पछ्याउनेहरूलाई दण्डित गर्ने डिजाइन गर्न डिजाइन गरियो. जब यो एल्गोरिथ्म बलियो भयो भने, Google ले निम्न कथन जारी गरेको छ:
".यो एल्गोरिथ्मले webspam कम गर्न र उच्च गुणस्तरको सामग्रीलाई बढावा दिन हाम्रो प्रयासमा अर्को सुधारको प्रतिनिधित्व गर्दछ।. जब हामी विशेष सङ्केतहरू विभाजन गर्न सक्दैनौं किनभने हामी मानिसहरू हाम्रो खोज परिणामहरू खेल्न चाहँदैनौं र प्रयोगकर्ताहरूको लागि अनुभव बिग्रेको छ, वेबमास्टर्सका लागि हाम्रो सल्लाह उच्च-गुणस्तर साइटहरू सिर्जना गर्ने फोकस गर्नका लागि हो जसले राम्रो प्रयोगकर्ता अनुभव सिर्जना गर्दछ। र सेतो टोपी एसईओ विधिहरू (GOOGLE) लाई कार्य गर्दछ।. "
यो लक्षित वेबसाइटहरु जुन धोखाधड़ी लिङ्क योजनाहरू प्रयोग गर्दछ Google मा उच्च श्रेणीमा. ती अनलाइन व्यापारीहरू र वेबमास्टरहरू जसले ब्ल्याक-टोपी एसईओ प्रविधिहरू प्रयोग गरी लिङ्क खरिद वा लिङ्क खेतीमा प्रयोग गरेका साइटहरूमा लिंक जूस प्राप्त गरेका थिए।. जब एक Google पेंगुइन अद्यावधिक रिलीज भयो, साइटहरूले बिना-गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू हटाउनका लागि कार्यहरू लिएका छन् रङ्कन प्राप्त गर्न सक्छ. यसको भागबाट, Google ले चाँडो र नि: शुल्क लिङ्कहरू हटाउने मौका दिन्छ. तपाइँलाई आवश्यक सबै कुराले Google Disavow लिङ्क उपकरणहरू लागू गर्ने छ. जो Google पेंगुइन अद्यावधिक द्वारा हिट भएका थिए यो एल्गोरिदम फेरि उनीहरुको रैंकिंग पदहरू प्राप्त गर्न फेरि भाग्न पर्खनुहोस्.
यो एल्गोरिदमले अझै पनि वेबसाइट रैंकिंगलाई गुणस्तर र सान्दर्भिक लिंकको रूपमा प्रभाव पार्दछ Google रैंकिंग प्रणालीको एक महत्वपूर्ण भाग हो।. यही कारणले तपाइँले ब्ल्याक टोपी वेब एसईओ प्रविधि लागू गर्न वा असामान्य एसईओ टोलीलाई कार्यान्वयन गर्न तपाइँलाई साइट प्रतिष्ठा खर्च गर्न सक्दछ।. हाल, पेंगुइन अपडेट लिङ्कहरू दुरुपयोग गरेपछि प्रश्नहरूमध्ये 3,1% प्रभावित भयो.